July Dream: The Royal Rich List
Posted by JulyDream at 10:43 AM
နောက်ပိုင်းမှာ နံပါတ်(၅)က နံပါတ်(၂) ကို ခုန်တက်သွားနိုင်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
မရတနာရေ... ဘာဖြစ်လို့လဲ ခင်ဗျ။ သိချင်လို့ပါ။
အဟင့် .... အရမ်းဝမ်းနည်းသွားပြီ။ အနော့်နံမည်လဲ မပါဘူး :P
သေချာတာပေါ့ ကိုဇူလိုင်ရယ် ... ၁ ကနေ ၁၀၀ ကတော့ ကျိန်းသေကို ၀င်တယ် ... ဒါပေမယ့် ကြေညာရဲမယ်တော့ မထင်...:)
မောင်လေးရယ် ဆင်ခြင်ပါကွယ်. မမတို.က စလူံးမှာ နေကြတာ.ချစ်လို.ပြောတာမှတ်ပါ.
ယူအေအီးသားတွေပါ။ ရေနံကလွဲရင် တစ်ခြားစီးပွားရေးအရဆို ဒူဘိုင်းက သာတယ်။ အဘူဒါဘီက နောက်ကနေ လိုက်နေရတာ။ ရေနံ အခြေအနေမကောင်းတော့ရင် ဒူဘိုင်းက ပိုချမ်းသာလာမှာပဲလို့ ပြောတာကြားဖူးခဲ့တယ်။ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်လို့ပေ့ါ။ (ဟင် ဘာမှလဲ ဆိုင်ဘူးနော်။:-D)
ကိုလကလေး... စာရင်းဝင်ချင်ရင် ရှိတာတွေ ထုတ်ကြွားလိုက်လေ။
ဆုဝေရေ... ဟုတ်ပ... ၁၀၀ ထဲတော့ အသာလေး ၀င်တယ်။ စိန်စီသောည အဟက်...
မခင်ဦးမေ... ဘာကို ပြောချင်တာလဲ ခင်ဗျာ။ အမ ဆိုလိုရင်းကို ကျွန်တော် သဘောမပေါက်ဘူး။ ဝေးတယ် ပြောလဲ ခံရမှာပဲ။ တကယ်ကို မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။
မရတနာ... အင်း... ဒူဘိုင်းက စီးပွါးရေးအရ သာမှာပဲ။ ဒူဘိုင်းမှာက ဟိုတယ် လုပ်ငန်းတွေလည်း ရှိသေးတယ်နော်။